Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Awona mazwe angalali e-US
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Awona mazwe angalali e-US
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Tourism • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IHawaii yindawo yesibini yokungalali e-US.
IHawaii ityhilwe njengeyona ndawo yesibini “engalaliyo” eMelika, ngokutsho kukaGoogle.
Idatha entsha ifumanisa ukuba abo bahlala e-Utah baneengxaki zokulala ze-Googling ngaphezu kwalo naliphi na elinye ilizwe eMelika.
IHawaii kunye ne-Idaho yindawo yesibini neyesithathu eyona ndawo ingalaliyo ngokulandelelana ngokokukhangela kukaGoogle.
IHawaii yayikwangurhulumente owakhangela 'Indlela yokulala' eyona mali iphezulu yesithathu.
Uphononongo olwenziwe ziingcali zokulala zihlalutyiwe Uphando idatha yentsingiselo ukwenza isalathiso ukuseka umgangatho oqinisekileyo apho amazwe afumana obona buncinci ubuthongo kwaye bafuna uncedo kakhulu.
Amagama afundiweyo aquka, 'Andikwazi kulala', 'Indlela yokulala', 'Uncedo lokulala' kunye 'Nobuthongo obungcono'.
I-Utah Googled imiba yokulala kunye neengxaki ngaphezu kwayo nayiphi na enye indawo eMelika, ikhangela iingxaki zokulala ngesantya esiphezulu ngaphezu kwamanye amazwe. Abahlali base-Utah basebenzise iGoogle 'Indlela yokulala' ngaphezu kwalo naliphi na elinye ilizwe e-US.
Hawaii lilizwe lesibini elingalaliyo eMelika elinamanqaku angama-24. Oku kuza ngenxa yeHawaii ibe yimeko yokuba iGoogled 'Andikwazi kulala' okwesibini kuzo zonke ezingamashumi amahlanu. IHawaii yayikwangurhulumente okhangele 'Indlela yokulala' eyona mali iphezulu yesithathu, inyusa umndilili wokungalali kukaGoogle kurhulumente.
Idaho yindawo yesithathu engalaliyo e-US ngokutsho Uphando uphendlo. U-Idaho ukhangele 'Indlela yokulala' kumthamo wesibini ophezulu kulo naliphi na iphondo ngeli lixa ekhangela 'Andikwazi kulala', isixa sesithathu siphezulu kuwo onke amazwe, enegalelo kumanqaku abo angalali.
INew Hampshire ikhangele igama elithi 'andikwazi kulala' kakhulu kuwo onke amashumi amahlanu imimandla, kodwa yakhangela amanye amagama amathathu angalali kancinci kakhulu xa ethelekisa, inika urhulumente amanqaku angama-84 angalali - nto leyo eyenza ukuba ibe ngowe-17 kwawona angalali. ilizwe eMelika.
Abahlali baseMntla Dakota bajonge kuGoogle 'ubuthongo obungcono' kunalo naliphi na elinye ilizwe ngaphandle kokubonisa ukuba lelinye lawona mazwe angalaliyo, abekwe njengeyona ndawo ye-41 yeyona ndawo ingalaliyo nenamanqaku angalali ali-138 xa kuthelekiswa ne-Utah engama-23.
Awona mazwe angalali eMelika, ngokukaGoogle: